Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.4.3 Non-mety santionany: santionany mifandraika
Tsy ny rehetra tsy mety santionany dia mitovy. Afaka manampy bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso farany ny anoloana.
Ny fomba sy ny mpiara-miasa aminy Wang ampiasaina mba hanombanana ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena Amerikana 2012 niankina tanteraka amin'ny fanatsarana ny tahirin-kevitra fanadihadiana. Izany hoe, ireo ka nanangona izay rehetra valiny araka izay azony natao ary avy eo dia nanandrana indray-lanja izy ireo. Ny mifameno paikady ho niara-niasa tamin'ny tsy mety santionany dia ny manana fahefana bebe kokoa ny dingana fanangonana antontan'isa.
Ny tsotra indrindra ohatra ny ampahany maso tsy mety santionany dingana dia anjaranareo santionany, ny teknika izay miverina ho any am-piandohan 'fanadihadiana fikarohana. Amin'ny anjaranareo santionany, mpikaroka mizara ny mponina ho vondrona samihafa (ohatra, zatovolahy, zatovovavy, sns) ary avy eo dia napetraka quotas ho ny isan'ny olona mba ho voafantina ao amin'ny vondrona tsirairay. Namaly ireo voafantina amin'ny fomba hiankina amin'ny kisendrasendra izany mandra-fikarohana efa nihaona ny anjaranareo ao amin'ny vondrona tsirairay. Noho ny quotas, ny vokatry ny santionany mijery bebe kokoa tahaka ny kendrena mponina noho ny mety ho marina raha tsy izany, fa noho ny probabilities ny fampidirana dia tsy fantatra ny mpikaroka maro no resy lahatra ny anjaranareo santionany. Raha ny marina, anjaranareo santionany dia anton 'ny "Dewey nandresy an'i Truman" fahadisoana ao amin'ny US 1948 filoham-fitsapan-kevitra. Satria manome misy fanaraha-maso ny santionany dingana, na izany aza, misy afaka mahita ny anjaranareo santionany hananako izay tombony tsy voafehy tanteraka nandritra ny fanangonana antontan'isa.
Mifindra any an-dafin'ny anjaranareo santionany, fomba maoderina kokoa ny fifehezana ny tsy mety santionany dingana dia izao azo atao. Iray fomba toy izany dia antsoina hoe santionany mifandraika, ary izany no ampiasain'ny sasany mpamatsy ara-barotra an-tserasera tontonana. Ao ny tsotra indrindra endrika, santionany mifandraika mila angon-drakitra loharano roa: 1) tanteraka firaketana ny mponina sy 2) ny tontonana lehibe ny mpiasa an-tsitrapo. Zava-dehibe ny ny mpiasa an-tsitrapo tsy mila ho mety santionany avy amin'ny vahoaka; mba hanamafisana fa tsy misy fepetra ho an'ny fifantenana ho any amin'ny tontonana, aho hiantso azy ho maloto tontonana. Koa, na ny mponina boky firaketana sy ny maloto dia tsy maintsy ahitana ny sasany tontonana mpanampy vaovao momba ny olona tsirairay, amin'izany ohatra, mihevitra aho taona sy ny firaisana ara-nofo, fa amin'ny zava-misy toe-javatra vaovao io mpanampy mety ho be tsipiriany kokoa. Ny hevi-petsin'i mifandraika santionany dia ny mifidy santionany avy amin'ny maloto tontonana amin'ny fomba izay miteraka santionany izay mitovy mety santionany.
Sample mifandraika manomboka rehefa milalao mety santionany dia nalaina avy amin'ny mponina bokim; milalao izany santionany lasa ho lasibatra santionany. Avy eo, miorina amin'ny mpanampy vaovao, tranga tao amin'ny kendrena santionany dia mifanentana amin'ny olona ao amin'ny maloto tontonana mba hanangana mifanentana santionany. Ohatra, raha misy vehivavy 25 taona tao an-kendrena santionany, dia ny mpikaroka mahita vehivavy 25 taona avy any amin'ny maloto tontonana mba ho ao amin'ny mifanentana santionany. Farany, mpikambana ao amin'ny mifanentana santionany dia nadinadinina hamokatra ny farany napetraka ny namaly.
Na dia ny mifanentana santionany toa ny lasibatra santionany, dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny mifanentana santionany dia tsy mety santionany. Mifanentana santionany ihany ny tanjona mifanaraka santionany amin'ny fantatra mpanampy vaovao (ohatra, taona sy ny firaisana ara-nofo), fa tsy amin'ny toetra unmeasured. Ohatra, raha toa ka ny olona eo amin'ny maloto tontonana miezaka ny mahantra-Rehefa dinihina tokoa, ny antony iray mba hanatevin-daharana ny fanadihadiana tontonana dia ny hahazoana vola-dia na dia ny mifanentana santionany toa ny kendrena santionany amin'ny teny ny taona sy ny firaisana ara-nofo dia mbola manana ny fitongilanana amin'ny mahantra. Ny ody ny tena mety santionany dia ny hanapaka avy olana eo amin'ny samy norefesiny sy unmeasured toetra (teboka iray izay mifanaraka amin 'ny fifanakalozan-kevitra ny mitovy ho an'ny causal inference avy observational Fianarana Chapter 2).
Amin'ny fomba fanao, santionany mifandraika miankina amin'ny manana tontonana lehibe sy maro karazana te-hamita fanadihadiana, ary izao no tena ataon'ny orinasa izay mety manam-bola ny hampivelatra sy hihazona izany tontonana. Koa, amin'ny fampiharana, dia afaka ny ho olana amin'ny mifandraika (indraindray tsara lalao ho an'ny olona iray ao amin'ny kendrena tsy misy santionany amin'ny tontonana) ary tsy valinteny (indraindray ny olona ao amin'ny mifanentana santionany tsy mety handray anjara amin'ny fanadihadiana). Noho izany, amin'ny fampiharana, mpikaroka manao santionany mifandraika ihany koa ny manao karazana lahatsoratra-stratification fanitsiana mba hanao vinavina.
Sarotra ny hanome mahasoa teorika antoka momba ny santionany mifandraika, fa amin'ny fampiharana dia afaka manatanteraka tsara. Ohatra, Stephen Ansolabehere sy Brian Schaffner (2014) raha oharina telo mifanitsy fanadihadiana ny tokony ho 1000 ny olona natao tamin'ny 2010 mampiasa telo samy hafa sy ny dinidinika fomba santionany: mailaka, an-telefaonina, ary ny Internet mampiasa tontonana santionany sy ny lahatsoratra mifandraika-stratification fanitsiana. Ny tombatombana avy amin'ny telo manakaiky dia tena mitovy amin'ny vinavina avy any ambony-kalitao benchmarks toy ny Current Mponina Survey (CPS) sy ny National Health Interview Survey (NHIS). More manokana, na ny Internet sy ny namany Sary fanadihadiana dia eny amin'ny iray isan-jato eo ho eo amin'ny 3 hevitra sy ny telefaonina fanadihadiana dia eny amin'ny 4 isan-jato hevitra. Fahadisoana lehibe izany dia eo ho eo izay hisy antenaina avy amin'ny santionany ny tokony ho 1000 ny olona. Na, Tsy misy amin'ireo fomba vokarina betsaka tsara rakitra, na ny Internet sy ny telefaonina fanadihadiana (izay naka andro na herinandro) dia betsaka haingana amin'ny saha noho ny namany Sary fanadihadiana (izay naka valo volana), ary ny Internet fanadihadiana, izay nampiasa santionany mifandraika, dia mora kokoa noho ny hafa fomba roa.
Ho famaranana, ny mpahay siansa ara-tsosialy sy ny statisticians dia mampino resy lahatra ny inferences avy amin'ireo tsy mety santionany, amin'ny ampahany noho izy ireo mifandray amin'ny tsy fahombiazana misy mahamenatra ny fanadihadiana fikarohana toy ny asa soratra Digest fitsapan-kevitra. Anisan'ny, manaiky izany aho fisalasalana: unadjusted tsy mety santionany dia mety hamokatra vinavina ratsy. Na izany aza, raha ny mpikaroka dia afaka hanitsy ny mifanavakavaka ao ny santionany dingana (ohatra, lahatsoratra-stratification) na mifehy ny santionany dingana somary (ohatra, santionany mifandraika), dia afaka mamokatra tsara kokoa vinavina, ary na dia vinavinan'ny ny toetra ampy ho an'ny ankamaroan'ny tanjona. Mazava ho azy, dia ho tsara kokoa ny manao tsara novonoina mety santionany, fa tsy misy intsony fa toa ho azo safidy.
Samy tsy mety santionany sy ny mety santionany mitovy amin'ny tsara, ary amin'izao fotoana izao dia mety ny raharaha ny ankamaroan'ny vinavina avy amin'ny mety santionany dia mendri-pitokisana kokoa noho ny vinavina avy amin'ny tsy-mety santionany. Kanefa, na dia ankehitriny aza, vinavinan'ny avy nitarika tsara tsy mety santionany dia angamba tsara lavitra noho ny vinavina avy amin'ny zara-nitarika mety santionany. Ankoatra izany, tsy azo inoana santionany dia betsaka mora kokoa. Araka izany, dia hita fa mety vs tsy mety santionany dia manolotra ny vola-toetra fivarotana-eny (Sary 3.6). Manantena, manantena aho fa ny tombatombana avy amin'ny tsara-nanao tsy mety santionany ho mora kokoa sy tsara kokoa. Koa, noho ny faharavan'ny amin'ny telefaona an-tariby an-telefaonina fanadihadiana sy tsy mitsaha-mitombo ny tahan'ny tsy valiny, manantena aho fa mety ho lasa bebe kokoa santionany lafo sy ny ambany kalitao. Noho ireo maharitra fironana, heveriko fa tsy mety ho santionany mainka zava-dehibe eo amin'ny vanim-potoana fahatelo ny fanadihadiana fikarohana.
Sary 3.6: mety santionany amin'ny fampiharana sy ny tsy mety santionany dia roa lehibe, heterogeneous sokajy. Amin'ny ankapobeny, misy vola-diso varotra-eny amin'ny tsy-mety hoe ambany santionany vola lany, fa ambony fahadisoana. Na izany aza, tsara-nanao tsy mety santionany dia afaka mamokatra tsara kokoa noho ny zara raha ny vinavinan'ny-nanao mety santionany. Amin'ny hoavy, manantena aho fa tsy mety santionany dia hahazo tsara kokoa sy mora vidy kokoa raha mbola mety santionany dia hahazo ratsy sy lafo kokoa.